चिकित्सकको लापरवाहीले तराई राजधानी अस्पतालमा एक नवजात शिशुको मृत्यु
अशोज १३, २०७८, ८:०८ PM
जनकपुरधाम । अवैद्य रूपमा संचालित जनकपुरधामका एक निजी अस्पतालका कित्सकको लापरवाहीले एक नवजात शिशुको ज्यान गएको छ ।
सो जन्मेकाे तेश्राे दिनमै जनकपुरधाम रामानन्द चाेक स्थित तराई राजधानी अस्पतालमा एक बच्चालाई चिकित्सकको लापरवाहीले ज्यान गुमाउनु परेकाे हाे ।
प्रसव पीडा सहितका पेटमा दर्द भएपछि उपचारका ल्याइएका बिरामीलाई समय नपुगेकै अवस्थामा पैसा कमाउने उद्देश्यले अस्पतालका चिकित्सक डा. भगवान सहनीले डिलेभरी गरेर बच्चा निकालेकाे र अर्का बालराेग चिकित्सक डा. गंगाप्रसाद यादवले समय गम्भीर अवस्थामा रहेका बच्चालाई रेफर नगरेकाे कारण बच्चाकाे मृत्यु भएकाे पिडीत परिवारले आराेप लगाएका छन ।
पिडीत परिवारले रेफर गर्न भन्दै आएकाेमा हिजाेसम्म बच्चा राम्रो अवस्थामा छ अस्पताल का संचालक समेत रहेका डा. सहनी र यादवले भन्दै आएकाे थियाे, बच्चा मरिसकेपछि रेफर गरेर आफ्नाे लापरवाही लुकाउन खाेजेकाे आराेप पिडीतले लगाएका छन । उनीहरूले सो अस्पतालमा बिहानैदेखि हो हल्ला गरेका थिए । पिडीत परिवारले का अनुसार अस्पतालका कर्मचारीले साढे १० बजे मै बच्चाको मृत्यु भइसकेको भन्दै अवस्थामा साढे ११ बजेतिर रेफरको पुर्जी थमाउनु आफैमा शंकास्पद रहेको बताए ।
पिडित परिवारले अस्पतालका चिकित्सक डा. यादवलाई मंगलवारदेखि नै बच्चाको राम्रो अवस्था छैन भनी रेफर गर्न भन्दै आएको थियो । तर ती डाक्टरले बच्चाको अवस्थामा सुधार आइसकेको भनी रेफर गरेन, आज बच्चाको मृत्यु भइसकेपछि रेफर पुर्जी थमाएपछि पिडीत परिवार आक्रोशित भई हो हल्ला गरेका थिए ।
समय नपुगेकै अवस्थामा अस्पतालका डा. भगवान सहनीले पैसा कमाउने उद्देश्यले अस्पतालमा भर्ना गरी अवस्था गम्भीर छ भनी बच्चालाई डिलेभरी गरी निकालेको कारण मृत्यु भएको पिडीत परिवारले भने । बच्चाका बुवा अजयकुमार साहले भने बच्चा जन्मिने सामान्य समय ३८ हप्तापछि हुन्छ तर डा. सहनीले ३४ हप्ता ५ दिनमै गर्भबाट बच्चालाई निकालेको बच्न सकेन ।
सर्लाही जिल्ला बसबरिया गाउँपालिका ६ निवासी अजयकुमार साहको गर्भवती श्रीमति सरिता साहलाई पेटमा दर्द भएपछि परिवारजनले तराई अस्पतालमा ल्यायो । अस्पतालमा पुगेपछि भिडियो एक्सरे गराएपछि डा. सहनीले पानीको मात्रा कम छ तत्काल भर्ना गर्नुपर्छ भने ।
भर्नाको केही समयपछि बच्चा र आमालाई बचाउनु छ भने तुरन्त बच्चा निकाल्नुपर्ने भनी अपरेशन गर्नुपर्ने डाक्टरले भनपछि हतास पिडीत परिवारले सहमति जनाए । तर सो बच्चाको जन्म अपरेशन नभई नर्मल नै सोमवार दिउंसो साढे १२ बजेतिर भयो । बच्चाको हर्टबीट रेट कम छ भनी एनआईसीयूमा भर्ना गरे दुई दिनसम्म हजारौं रुपैया खर्च गराई अन्त्यमा भन्यो बच्चालाई बचाउन सकिएन ।
पिडित परिवार सरिताका बुवा रामभगत साहले भने अस्पतालले एक त मेरो बच्चाको ज्यान लियो, त्यसपछि नर्मल डिलेभरीको बील ७५ हजार रुपैया रकम मांग गरयो । हुनत पिडित परिवारले न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दिने भनेपछि अस्पताल व्यवस्थापक सो रकम छुट गरेका छन ।
रामभगतले भने पैसा छोडनु ठूलो कुरा होइन तर पैसा कमाउने उद्देश्यमा सोझासाझा बिरामीलाई झाँसामा राखि समय अगावै डिलेभरी गर्नु गलत हो, आज मेरो साथ घटना भएको छ भोली अरुसँग पनि हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले यस्ता डाका अस्पतालहरुलाई छानबीन गरी कारवाही गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
रामभगतले भने भिडियो एक्सरे रिपोर्टमा बच्चाको अवस्था हर्टबीट लगायतका सबै कुरा ठिक भएपनि आफ्नो छोरीको पानीको मात्रा कम भएको अवस्थामा उपचार पश्चात ठिक गरेर समयमा डिलेभरी गर्न सकिन्थ्यो । तर पैसा कमाउने चक्करमा समय अगावै डिलेभरी गरी बच्चाका ज्यान लिएका छन भने छोरी सुरिताको अवस्था समेत गम्भीर हुन गएको छ, यसको जिम्मेवार अस्पताल व्यवस्थापक र चिकित्सक हुन ।
उता अस्पतालका संचालक एवं चिकित्सक डा. गंगाप्रसाद यादवले भने सरिताको कुन अवस्थामा डिलेभरी गरियो त्यो आफूलाई थाहा छैन, तर बच्चाको जन्म पश्चात हर्टबीट कम भएको कारण आक्सीजन लगाएर एनआईसीयूमा राखेर दुई दिनसम्म उपचार गरियो ।
समय नपुगेको कारण बच्चामा फोक्सो लगायतका विकास हुन नसकेको कारण गम्भीर अवस्था थियो, उपचार गर्दागर्दै बचाउन हामीले बचाउन सकेनौं यसमा चिकित्सकको लापरवाही नरहेको दाबी उनले गरे ।
पटक पटक विवादमा तानिदै आएकाे साे अस्पताल अवैद्यानिक रहेकाे अस्पतालका संचालक डा. यादव समेतले सांकेतिक रूपमा स्वीकार गरेका छन ।
संचालक डा. यादवले भाैतिक पुर्वाधार र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा रहेकाे दाबी गरेपनि सम्बन्धित केही निकायमा दर्ता प्रक्रियामा रहेकाे बताए । उनले भने हाल काठमाण्डाै कम्पनि रजिष्ट्रार दर्ता गराई पान नम्बर लिएर संचालन गरिरहेकाे छु । मन्त्रालय वा स्थानीय तहमा दर्ता छैन, प्रक्रिया रहेकाे छ ।